Wareysiyada Lagu Iibsanayo Iibsiga Wadayaasha Basaska 73 ee Mersin waa la dhameystiray | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinWareysiyada Ayaa Dhameystiray Iibsiga Iibsiga Wadayaasha Baska 73 Ee Mersin
23 / 10 / 2019 33 Mersin, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Wareysiyada ku saabsan iibsiga baska soforu ee Mersin
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin, darawalka baska 73 ayaa dhameystiray wareysiyada kadib markii lagu dhawaaqay. Marka lagu daro isugeynta codsiyada '1003', Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay shaqaaleysiin doontaa darawalka 73, oo ay ku jiraan dumarka.
Ujeeddada laga leeyahay inay ku jiheysato Muwaadiniinta Mersin gaadiidka dadweynaha iyo inay siiso adeeg gaadiid dadweyne oo deg deg ah, badbaado leh oo raaxo leh, Dowladda Hoose waxay ka dooran doontaa darawalka dhediga ee 73 darawalka iyo darawalka 25 darawalnimada ragga.
Waxay ahayd inay qaadatay maalmo 26 oo aysan ka badneyn 66
Ka dib markii meesha laga saaray xayeysiiska, degmada magaalo weynaha waxay waraysiyo la yeelatay guddiyadii ay ka mid ahaayeen saraakiisha waaxda gaadiidka waxayna barteen kartida garoonka. Wareystaha wuxuu si guul leh ugu gudbiyay musharixiinta darawalka, isla markaaba bilowga shaqada, isteerinka ayaa bilaabi doona inuu ruxo. Ku dhaw 1003, dalabka 40 wuxuu ka kooban yahay murashaxiinta dumarka ah iyo guud ahaan haweenka 25 haween ah ayaa laga shaqaaleysiin doonaa qaybtan.
Chauffeurs waa inay ka weynaataa 26 oo aysan ka badneyn 66. Darawalada waxay u baahan yihiin inay lahaadaan dukumiintiyada SRC1 iyo SRC2, laysanka darawalnimada duugga ah E, laysanka darawalnimada cusub D iyo dukumiintiyada cilmu-nafsiga ah.
Topçuoğlu: "Waxaan soo iibsannay annaga oo ulajeeddadeena ugu jiheynay muwaadiniinteena gaadiidka dadweynaha" Ersan Topçuoğlu, Madaxa Waaxda Gaadiidka ayaa sheegay inay isticmaali doonaan wadarta guud ee wadaha basaska 73 maadaama agaasinka waaxda gaadiidka dadweynaha, Büyük 25 ay tahay haween iyo shaqaalaha 48 Waanu shaqaalaynaa. Waxaan qiimeyn ku sameyn doonaa darawaladaan diyaarin horudhac ah oo loogu talagalay baskeena 73 oo loo qorsheeyay in la qaado wixii ka dambeeya sanadka cusub, waxaanan qabsan doonnaa codsiyada waxaanan si deg deg ah u bilaabeynaa nidaamka arjiga shaqada. Waxaan u soo iibinay macaamiishan ujeedada ah in aan ku hagaajinno muwaadiniintayada gaadiidka dadweynaha iyo si dhakhso leh, gaadiid nabadgelyo leh oo raaxo leh.
Topçuoğlu, laysanka darawalka, dukumiintiyada SRC, iyo gaar ahaan xirfadaha isgaarsiinta ee darawalada ayaa fiiro gaar ah siin doona musharixiinta.
Kılıç: "Hooyaday iyo aabbahay waa darawallada xamuulka"
Betül Arslan Kılıç wuxuu galay wareysiga wuxuuna sheegay inuu jecel yahay inuu kujiro taraafikada uuna doonayo inuu u adeego dowlada hoose uuna dalbaday iibsiga wadaha baska. Haweenkayagu waxay moodayaan inaysan dhab ahaan ka noqon karin darawallada basaska magaalada. Gabi ahaanba waan kasoo horjeedaa. Hooyaday iyo aabbahay waa darawallada xamuulka. Haddii Eebbe idmo, waxaan sidoo kale awoodi doonaa inaan galo darawallada basaska magaalada oo Ilaahay barakeeyo, ”ayuu yidhi.
Shur: X Waxaan leeyahay 30 sano oo waayo-aragnimo firfircoon ah oo ku saabsan ruqsadeynta ”
Gönül Şur, 58, wuxuu cadeeyay inuu arkay xayeysiinta warbaahinta bulshada uuna ku dabaqi karo. Hal mushahar kama qaadan karno. Taksi, bas yar, darawal kaxeeya. Waxaan leeyahay 30 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan khiyaamada. Aad ayaan ugu faraxsanahay in haweenku dalban karaan, marka waxaan u imid sababtoo ah waan aaminay. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo madaxweynahayaga Vahap Seçer oo na siiya fursadan ..
Kafa: orum waan jeclahay wadista baabuurka
Elif Kafa, oo ah hooyada 2 hooyadeed, ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan yihiin inay haweenku dalban karaan darawalka baska “Waan ku faraxsanahay in Degmadeena ay taageerto haweenka ayna wadada u xajiso. Waxaan rajeynayaa inay fiicantahay. Waxaan hore u ahaa darawalka adeegga. Waan jeclahay wadista Had iyo jeer waan sameeyaa wixii aan kari karo. Waxaan rajeynayaa inaan ku sii wadno dariiqaas haddii nasiib wanaag la kulmo ayuu yiri.
Kafa wuxuu yidhi, ak waxaan dareensanahay inaan ahay qof sharaf leh haweeney ahaan, hooyo ahaan. Waxaan kula talinayaa qof walba inuu sameeyo waxa uu jecel yahay. Haweenku waa inay had iyo jeer noqdaan geesi. U oggolow inay ku dhiirigeliyaan oo sameeyaan waxay doonayaan inay sameeyaan. Waxaan nolosha u arkaa si togan. Haddii aan gacan ku siino gacanta gacanteena, wax kasta waan sameyn karnaa ”.
Sacad: "Maaddaama oo aan dumarku nahay dad edeb leh oo is-faham leh, waxaan hubaa inaan ku guuleysan doonno xirfaddan"
Şerife Alkış waxay xustay inay aad u jeceshahay ceyrinta isla markaana ay rabto inay taas sameyso. Waan ogaa inay ahayd riyo aan la gaari karin. Laakiin markii aan arkay saaxiibbada dumarka ah ee gobollada kale, waan halgamayaa maxaa yeelay waxaan u malaynayaa riyadan inay noqon karto mid dhab ah oo aan rajaynayo inay ahaan doonto. Waxaan rabaa inaan sameeyo tan. Waan jecelahay waxayna dadka ka dhigaysaa mid aad u qurux badan markay jeclaadaan waxay qabtaan. Dadka, dadkeenu waxay noqon doonaan kuwa wax soo saar badan. Maaddaama oo ah haweenkeennu aad u edebi badan nahay oo fahamsan nahay, waxaan hubaa inaan ku fiicnaan doonno oo ku guuleysan doono xirfaddan Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Madaxweynahayaga fursad noo siisay haweenkan. ”
Kadib magacyada lagu cadeeyay wareysiga, darawalada waxaa lagu qaadi doonaa imtixaanka wadista isla markaana ku guuleysiga shaqaaleysiinta wadayaasha.
Qaabilashada Baabuurka Baska
Miyaa Xaaladda Beerta Qaranka ee Goreme Valley laga saarayaa Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare?